डेरी क्षेत्रले फड्को मारेको छ : सुमित केडिया / संवाद – NewsAgro.com
October 24, 2016 December 12, 2016 newsagro0Comments NDA Nepal Dairy Association नेपाल डेरी एशोसिएशन, Sitaram gokul Milk Limited सीताराम गोकुल मिल्स, डेरी Dairy, दुग्ध Milk, दुग्ध विकास संस्थान DDC, दूध Milk, सुमित केडिया sumit kedia
यो समाचार 710 पटक पढिएको
♦ छिमेकी मुलुकबाट अनुदानको दूध र दुग्धजन्य पदार्थ आयात हुँदा त्यसले नेपालको डेरी उद्योग मात्रै होइन, किसानसमेत प्रभावित हुँदै आएका छन् ।
♦ अहिले किसानले घाँस, पराल, छवाली, कोदोको नल र झारपातभन्दा दानामा जोड दिन थालेका छन् ।
♦ उद्योगमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनुपर्छ । १२ घण्टाको लोडसेडिङका कारण लागत खर्च झन् बढेको छ ।
नेपालको कृषि क्षेत्रमध्ये धान वाली उत्पादन र कुखुरा उत्पादन पछि तेश्रो नम्बरमा अहिले डेरी क्षेत्रले फड्को मार्ने क्रम जारी छ । नेपालमा डेरी क्षेत्र (दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ) फस्टाउने क्रममा छ । दूध आफैमा पूर्ण खाद्य पदार्थ मानिन्छ । बालकदेखि बृद्धसम्मलाई यो आहार नभई हुदैंन् । नीजि क्षेत्रको डेरीतर्फ बढ्दो आकर्षण र लगानीका कारण उपत्यकासहित मुलुकभरका जिल्लामा यतिवेला डेरी उद्योगहरु धमाधम खुल्ने क्रममा छन् । अहिले डेरी क्षेत्रमा मात्रै नीजि र सरकारी क्षेत्रबाट करिब १७ अर्बभन्दा बढीको लगानी छ । केही उद्योगहरु सरकारी मापदण्डभित्र रहेर राजस्व बुझाएर सञ्चालित छन् भने कतिपय उद्योगहरु छाडा र अनियन्त्रित रुपमा सञ्चालनमा छन् । सरकारले यस्ता डेरीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैंन् ।
सरकारी मापदण्ड पुरा गरेका डेरी उद्योगहरुको छाता संगठन नेपाल डेरी एशोसिएसन अहिले यो क्षेत्रको विकास र दूधको गुणस्तरमा वकालत गर्दैआएको छ । अहिले एशोसिएसनको नेतृत्व व्यापारिक घराना समूह केडिया समूहका सुमित केडियाले गर्दैआएका छन् । नेपालमा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न उपकरणको सहयोगमा दूध र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्दैआएको सीताराम गोकुल मिल्कका केडिया प्रवन्ध निर्देशक हुन् । सीताराम गोकुल मिल्स डिडिसीपछि मुुलुककै दोश्रो दूध उत्पादन गर्ने उद्योगको रुपमा आउछ । एशोसिएसनमा उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लाका एक सय ७५ वटा डेरी उद्योग आवद्ध छन् । प्रस्तुत छ डेरी क्षेत्रको समग्र अवस्थाको बारेमा केडियासँग राजेश बर्माले गरेको कुराकानीको संक्षेप :
नेपालका डेरी क्षेत्रको समग्र अवस्था कस्तो छ ?
केडिया : नेपालमा डेरी क्षेत्रको भविष्य उज्जवल छ । पछिल्लो समयमा यो क्षेत्रले नेपालमा ग्रुमिङ्ग गर्दैछ । धानवाली र कुखुरा पालनपछि कृषि क्षेत्रका कुनै क्षेत्र अघि बढेको छ भने त्यो डेरी सेक्टर नै हो । अहिले यो क्षेत्रमा सरकारी र नीजि क्षेत्रको १५ अर्बभन्दा बढीको लगानी छ । मुलुकभर कुना कुनामा डेरी खोल्ने लहर चलेको छ । अहिले मुलुकभरमा गरी दैनिक ४८ लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । यसमध्ये साढे चार लाख लिटर उपत्यकामा खपत हुन्छ । बाँकी दूध स्थानीय जिल्लामा खपत हुन्छ । उत्पादित दूधमध्ये करिब १५ प्रतिशत उद्योगमा खपत हुन्छ । बाँकी ३५ प्रतिशत स्थानीय जिल्लाका मिठाई पसल र चिया पसलमा र ५० प्रतिशत किसानले आफै उपभोग गर्दैआएका छन् । डेरी सेक्टरमा किसान तहका चार लाख ५० हजारले रोजगारी पाएका छन् भने उद्योग तहमा २० हजारले रोजगारी पाएका छन् ।
कतिपय सम्पूर्ण सरकारी मापदण्डलाई अंगालेर सञ्चालनमा छन् भने कतिपय आफुखुशी सञ्चालनमा छन् । मुलुकभर अहिले अनौपचारिक तथ्याँकअनुसार करिब सातसयको हाराहारीमा डेरी उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । हिजोका दिनमा दूध संकलन गरी प्रशोधन पश्चात बिक्रि बितरण गर्ने उद्योगहरु अहिले विविधिकरण प्रकृयामा गएर दूधबाट पनिर, चिज, मिठाई, खुवा, घिउ, आइसक्रिमलगायतका दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्न सक्षम भएका छन् । जसले गर्दा छिमेकी मुलुकहरुबाट बर्षेनी ठूलो परिमाणमा आयात हुने दूध र दुग्धजन्य पदार्थको परिमाण घट्दो क्रममा पुगेको छ । अहिले पनि छिमेकी मुलुकहरुबाट बर्षेनी करिब चार अर्ब मूल्यबराबरको दूध र दूग्धजन्य पदार्थ आयात हुन्छ । समय समयमा केही प्राविधिक समस्याहरुका कारण माथि उठ्न थालेको यो क्षेत्र कहिले काँही धरासायी हुने अवस्थामा पनि पुग्ने गरेको छ ।
हामी गुणस्तरयुक्त दूध र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्न प्रतिवद्ध छौं । यसका लागि एशोसिएसनमार्फत पनि सबै उद्योगलाई गुणस्तर कायम राख्न विशेष निर्देशन दिइएको छ । विभिन्न समयमा गुणस्तर कायम राख्न छलफल, तालिम र प्रशिक्षणजस्ता कार्यक्रमहरु पनि नियमित रुपमा सञ्चालन गर्दैआएका छौं । सरकारले दर्ता बिना र सरकारी मापदण्ड पुरा नगरी चोक र गल्लीहरुमा गुणस्तरहिन पोके दूध बिक्रि गर्दैआएका साना डेरीलाई कानुनी दायरामा ल्याइदिने हो र प्रविधि, प्राविधिक सल्लाह तथा कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुन सके यो क्षेत्रले निक्कै उचाई प्राप्त गर्न सक्छ । राज्यले समय समयमा विश्व परिवेशमा भएका दूध र दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तर, प्रोत्साहन र बजारीकरणसम्बन्धी नीतिहरु अध्ययन गरेर सोही आधारमा नीजि क्षेत्रलाई पनि समावेश गरी भएका नीति तथा ऐनलाई समय सुहाउदो परिमार्जन पनि गर्दै लैजानु पर्छ । स्वदेशी उद्योगलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ । यो क्षेत्रलाई थप अगाडी बढाउन राज्यको उद्योगमैत्री नीति आवश्यक छ ।
तपाईले डेरी सेक्टरमा समस्याहरु छन् भन्नुभयो । के के हुन् त्यस्ता समस्याहरु ?
केडिया : डेरी क्षेत्रलाई थप विकास गर्न केही समस्याहरु हामीले भेटेका छौं । यस्ता समस्यालाई समाधान नगरेसम्म यो क्षेत्र अघि बढ्न सक्दैंन र लगानी पनि यो क्षेत्रमा आउदैंन् । समस्याहरु समाधान नगर्ने हो भने नीजि क्षेत्रका उद्योगहरु धरासायी पनि हुन सक्छ । मुख्य गरी छिमेकी मुलुकबाट अनुदानित दूध र दुग्धजन्य पदार्थ नेपालमा आयात हुँदा त्यसले नेपालको डेरी उद्योगमात्रै होइन्, किसानसमेत प्रभावित हुँदैआएका छन् । छिमेकी मुलुकले किसान र उद्योगलाई पनि विभिन्न चरणमा विभिन्न प्रकारका अनुदान उपलब्ध गराएको छ । जसले गर्दा छिमेकी मुलुकबाट आउने दूध र दुग्धजन्य पदार्थ निक्कै सस्तो छ । यस्तो सस्तो दूध र दुग्धजन्य पदार्थसँग नेपाली उत्पादनले बजारमा प्रतिस्र्पधा गर्न सकेको छैंन् ।
हामीकहाँ लागत खर्च नै अत्याधिक छ । लागत खर्च नघटेसम्म स्वदेशी उत्पादनले छिमेकी मुलुकको उत्पादनसँग प्रतिस्र्पधा गर्न सक्दैंन् । प्रतिस्र्पधाको अभावमा बजार पाउन कठिन छ, स्वदेशी उत्पादनलाई । त्यसैगरी नेपालमा डेरी क्ष्ोत्रको बिकास हुँदै गर्दा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको निक्कै अभाव खडकिएको छ । आज बजारमा डेरी सेक्टरसम्बन्धी बिज्ञता भएको म्यानेजर, अपरेटर र डेरी बिज्ञ खोज्नुहुन्छ भने बजारमा पाइदैंन् । यो क्षेत्रको विस्तारसँगै दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन नसक्दा उद्योग सञ्चालन गर्न समस्या छ । यस्तै गोठदेखि ओठसम्मको प्रक्रियामा बैज्ञानिक प्रविधी अबलम्बन नहुँदा समय समयमा कोलिफर्मजस्ता समस्याले पनि उद्योगलाई पिरोल्दै आएको छ । कोलिफर्म उद्योगी एक्लैले गर्दा कम गर्न सकिन्न । यसका लागि किसान तहदेखि नै शुद्धता र स्वच्छतामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अनि मात्रै राज्यले भनेअनुसार कोलिफर्मलाई कम परिमाणमा झार्न सकिन्छ । दूध उत्पादन हुने गाउमा गएर हेर्नुस् । दूध कसरी दुहिन्छ । कस्ता भाडामा राखिन्छ । कसरी संकलन गरिन्छ । यस्ता मूलभुत बिषयमा ध्यान नदिने हो भने उद्योगमा जस्तो सुकै अत्याधुनिक प्लान्ट राखेर पनि स्वच्छ दूध उत्पादन गर्न सकिन्न् । अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित अमेरिका, युरोप र भारतलगायतका मुलुकमा प्रशोधित दूधमा अधिकतम कोलिफर्मको मात्रा प्रति मिलिलिटर पाँचदेखि १० सम्मलाई मापदण्डभित्र राखेको छ । तर हामी कहाँ शुन्यमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।
राज्यले नीजि क्षेत्रलाई थप अगाडी बढाउन केही मुलभूत बिषयमा ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ । अनि मात्रै यो क्षेत्र थप प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सक्छ । डेरी सञ्चालन गर्ने उद्योगीलाई राज्यले सुरुमा शिप र प्राविधिक जानकारी उपलब्ध गराएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । समय समयमा आवश्यक पर्ने आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । सबै सुविधा प्राप्त गरेर पनि डेरी क्षेत्रले फट्याई गरेको अवस्थामा कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
यसैगरी अहिले दुधमा चिल्लोपना(फ्याट) र दूधमा ठोस पदार्थ(एसएनएफ) को उपस्थिति पनि कम परिमाणमा हुँदा उद्योगीहरुले ठूलो समस्या व्यहोर्न बाध्य भएका छन् । ति दुई तत्व कम परिमाणमा दूधमा उपस्थित हुँदा कतिपय उद्योगीले चाहेर पनि उत्कृष्ठ गुणस्तर भएको दूध उत्पादन गर्न सकेका छैंनन् । यस वाहेक नीजि क्षेत्रसँग राज्यको व्यवहारमा पनि अर्को समस्या छ । राज्यले डेरी सेक्टरको विकासका लागि अनुसन्धान, विकास र अनुगमनसम्बन्धी संयन्त्रको पनि विकास गरिदिनुपर्छ । सरकारी स्वामित्वको डिडिसीलाई बर्षेनी सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएर सञ्चालन गराउदै आएको छ । तर नीजि क्षेत्र बर्षेनी बैंकबाट चर्को व्याजदरमा ऋण उठाएर उद्योग सञ्चालन गर्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी अनुदानमा सञ्चालन हुने डिडिसीसँग नीजि क्षेत्र कहिले पनि प्रतिस्र्पधा गर्न सक्दैंन् । डिडिसीले अभिभावकको भूमिका खेलिदिएको भए नीजि क्षेत्रका उद्योग पनि निक्कै फस्टाउने थियो ।
यस्तै हामीले पटक पटक राज्यको ध्यानाकर्षण गराउदै आएका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको अवस्था हेरेर गरेको वर्गीकरणजस्तै नेपालभर रहेका साना, मझौला, ठूला र घरेलु गरी चार भागमा वर्गीकरण गरी वर्गीकरण गरिदिनुपर्छ । वर्गीकरणअनुसार चारवटै प्रकारका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड, लगानी, बजार र सुविधाको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । साथै नेपालमा उत्पादन हुने दूधको खपत हुन नसकेको अवस्था छ । अहिले पनि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र बिद्यार्थीले आयातित दूध र दूग्धजन्य पदार्थ उपभोग गर्दैआएका छन् । यो क्षेत्रमा स्वदेशी दूध र दुग्धजन्य पदार्थको उपभोग गराउन सक्यो भने कृृषिमा सबैभन्दा माथि डेरी क्षेत्र खुडकिलो चढ्न सक्छ ।
छिमेकी मुलुकको उत्पादनसँग बजार प्रतिस्र्पधा गर्न लागत खर्च कसरी कम गर्न सकिन्छ ?
केडिया : लागत खर्च कम गर्न केही विशिष्ट प्रकृतिका बिषयबस्तुमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई छ । अहिले किसानहरुले घाँस, पराल, छवाली, कोदोको नल र झारपातभन्दा दानामा बिशेष जोड दिएका छन् । गाईभैसीलाई अहिले बिशेषगरी दाना खुवाउने चलन बढेको छ । दाना खुवाउने पनि वैज्ञानिक तरिका हुन्छ । तर किसानले आफुखुशी आवश्यकताभन्दा बढी परिमाणमा दानाको प्रयोग गर्दैआएका छन् । यसले गर्दा किसान तहमा लागत खर्च निक्कै महँगो भएको छ । घाँसभन्दा दानामा निर्भर आहारा प्रक्रियालाई हटाउनुपर्छ । यसले गर्दा धेरै हदसम्म लागत खर्च कम हुन्छ । दानाकै कारण करिब ७० प्रतिशत लागत खर्च बढेको छ ।
त्यस्तै उद्योग तहमा राज्यले लोडसेडिङ्ग प्रणालीलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । १२—१२ घण्टाको लोडसेडिङ्गका कारण लागत खर्च झन् बढ्दै गएको छ । लोडसेडिङ्ग हुँदा जेनरेटरको प्रयोग गरी उत्पादन गर्दा थप ६० प्रतिशतसम्म लागत खर्चमा बृद्धि भएको छ । अन्य मुलुकमा उद्योगले लोडसेडिङ्गको समस्या वेहोर्नुपरेको छैंन् । राज्य तहमा फोरेज मिसन र नश्ल सुधार र उन्नत जातका गाई तथा भैसीको सिमेन उत्पादन हुनुपर्छ । यसैगरी डेरी उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका उपकरण आयात गर्न विशेष सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ । यस्ता चार तहमा मात्रै प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकियो भने धेरै हदसम्म लागत खर्च कम गरी किसानलाई नै बढी आम्दानी दिन सकिन्छ ।
तपाईको स्वामित्वमा रहेको सीताराम गोकुल मिल्सले उपभोक्ताका लागि आगामी दिनमा कस्ता प्रकारका उत्पादनहरु ल्याउने तयारी गरेको छ ?
केडिया : निश्चय नै हामी पनि नयाँ सोच लिएर अहिले अघि बढिरहेका छौं । हिजोका दिनसम्म हामीले दूध र घिउ उत्पादन गर्दैआएका थियौं । अहिले हामी दूग्ध पदार्थको विविधिकरणमा जाने योजना अघि सारेका छौं । जसअन्तर्गत आगामी पाँच महिनापछि उपत्यकाका उपभोक्ताहरु माझ दूध र घिउ वाहेक हाम्रै ब्राण्डमा दही, पनिर, मिठाई, लस्सी र फ्लेवर मिल्क लिएर आउदैंछौं । यसका लागि अहिले भारतबाट अत्याधिक उपकरण र कामदार ल्याएर प्लान्ट निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ ।
← अलैँचीको मूल्य घटेपछि किसान चिन्तित
यस्तो छ तरकारीमा ‘दलाल’ को दलाली, संकलकदेखि खुद्रा व्यापारीसम्मको जालो →
खोरेत रोग नियन्त्रणमा यसकारण कठिनाई : डा झा
युवाहरु सफल कृषक बन्ने बाटोमा छन् /अन्तरवार्ता
November 9, 2014 newsagro 0